စိတ်ကူးအိပ်မက်များ အမှန်တကယ်ဖြစ်လာပြီ ပရိုမိုးရှင်းမှ ကံထူးရှင်၏ အားတက်ဖွယ်ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်
နိုဝင်ဘာလ စိတ်ကူးအိပ်မက်များအမှန်တကယ်ဖြစ်လာပြီ ပရိုမိုးရှင်းမှ ဆုရှင်ဖြစ်သူ - အင်ဒိုနီးရှားမှ Mr. Fanny Setiaအကြောင်းကို FBSအဖွဲ့မှ တင်ဆက်လိုက်ရပါသည်! ဘ၀သစ်စတင်ဖို့ ခြေတုတစ်ခုလိုချင်တဲ့အကြောင်း ကိုဖတ်ပြီး FBSတစ်ဖွဲ့လံး မျက်ရည်တောင်ကျရတဲ့အထိခံစားခဲ့ကြရပါသည်.
၂၀၀၉ခုနှစ်မှာ ဆိုင်ကယ် အက်ဆီးဒင့်ကြောင့် ခြေတစ်ဖက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့နောက်မှာ သူ့ဘ၀က လုံးဝကိုပြောင်းလဲသွားပါတော့တယ်. "ကျွန်တော့်ဘ၀ လုံးဝကိုပြောင်းလဲသွားခဲ့ပြီး ဆိုးဆိုးဝါးဝါးကို စိတ်ကျရောဂါ ခံစားခဲ့ရပါတယ်. အိပ်ယာထဲ တစ်လလောက် ဘာမှမလုပ်ဘဲ လှဲနေခဲ့ရပါတယ်. ဖြစ်ခဲ့တာတွေကို လက်မခံနိုင်ခဲ့ပဲ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပဲ အပြစ်တင်နေခဲ့မိပါတယ်. လို့ - Mr. Setia saysက ပြောပြခဲ့ပါတယ် အက်ဆီးဒင့်မဖြစ်ခင်တုန်းက သူဟာ စက်ချုပ်ပြီး မိသားစုနဲ့ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေထိုင်ခဲ့ပေမယ့် မျက်စိတစ်မှိတ်အတွင်း ကံဆိုးမိုးမှောင်ကျခဲ့တာပါ.
Mr. Setia အနေနဲ့ ခြေတုတစ်ခုလိုချင်ပေမယ့် ငွေကြေးမတတ်နိုင်ခဲ့ပေမယ့် သူ့ပုံမှန်ဘ၀ကိုသူပြန်လိုချင်တဲ့အတွက် သူ့ဆန္ဒတွေကို FBSကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်. သူ့အိပ်မက်တွေကို ကူညီဖြည့်ဆည်းပေးခွင့် ရလိုက်တဲ့အတွက် အလွန်ကြည်နူးမိတယ်ဆိုတာ ပြောစရာတောင်လိုမယ်မထင်ပါ.
သူသာတကယ်လိုချင်နေရင် စိတ်ဆန္ဒပြင်းပြနေရင် အရာအားလုံးက တကယ်ဖြစ်လာမှာဆိုတာကိုသိထားတဲ့အတွက် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ နိုဝင်ဘာလဆုရှင်ကတော့ သူနဲ့လုံးဝကို ဖစ်ဆိုဒ်ဖြစ်တဲ့ ခြေတုတစ်ချောင်းကို ရရှိသွားခဲ့ပြီး - အခုဆိုရင် သူ့ရဲ့ ပုံမှန်ဘ၀ကို ပြန်လည်ရရှိသွားခဲ့ပါပြီ. သင်အနေနဲ့ မျှော်လင့်ချက်ကိုသာဆုပ်ကိုင်ပြီး နေလိုက်ပါ. သင့်ကိုဂရုတစိုက်နဲ့ ကူညီဖေးမပေးမယ့်သူတွေရှိနေပါတယ်.
ထရိတ်ဒင်းက သူ့အတွက်အရေးအဆင်ပြေပါတယ်: "ဒါကအရမ်းကောင်းတဲ့အလုပ်ပါ. ကျွန်တော့်အနေနဲ့ ဘယ်အချိန် ဘယ်နေရာကဆို ထရိတ်လုပ်နိုင်လို့ပါ"လို့ Mr. Setiaက ပြောပြသွားခဲ့ပါတယ်. ဒါကြောင့် ဘ၀က ယ်လိုပဲခက်ခဲကြမ်းတမ်းနေပါစေ, ဘ၀မှာ အခွင့်အလမ်းတွေ အများကြီးရှိနေပါတယ်. ပြီးတော့ FBSကလဲ သင့်ကိုကူညီပေးဖို့ အဆင်သင့်ရှိနေပါတယ်. သင့်အခွင့်အရေးကို အသုံးချလိုက်ပါ!